Iran: Ny Fiaran’i Ahmadinejad Nitsambikinana Vehivavy Sy Ilay Zokiolona Noana · Global Voices teny Malagasy
Iran: Ny Fiaran'i Ahmadinejad Nitsambikinana Vehivavy Sy Ilay Zokiolona Noana
Voadika ny 22 Avrily 2012 23:03 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, عربي, Shqip, Ελληνικά, اردو, македонски, English
Niteraka sahotaka tokoa ny lahatsary iray nampiseho tovovavy nitsambikina teo ambonin'ny fiaran'ny filoha Iraniana Mahmoud Ahmadinejad tamin'ny fotoana nitsidihany ny tanànan'i Bandar-Abbass (faritra atsimon'i Iran) tamin'ny 10 Avrily 2012.
Feno mpitazana manodidina ny fiara izay nifampiresahan'ilay tovovavy vetivety tamin'ny filoha. Mandritra izany fotoana izany, misy lahiantitra iray miezaka ny manatona an'Ahmadinejad. Mitabataba izy hoe, “Ahmadinejad, Noana aho! Ahmadinejad, noana aho!” Miezaka ny mitsiky sy manofahofa tanana i Ahmadinejad izay mitsangana anaty fiara tazamaso hatreo amin'ny tratrany amin'ny tafon'ny fiara.
Mahavariana, fa raha miresaka momba ilay tovovavy ny ankamaroan'ny haino aman-jery tandrefana, nifantoka tany amin'ilay lahiantitra kosa ny mason'ny mpamahana bolongana Iraniana.
Karansadr niteny [fa]:
Io lahiantitra mihiaka hoe “Noana aho, efa retirety aho” no mampiseho fa lainga ny fampanantenan'i Ahmadinejad rehetra. Tsaroanay hatrany ny fotoana nilazany fa Iran irery no firenena tsy misy hanoanana.
Babak Dad manoratra [fa]:
Indray andro any, hanontany antsika ireny olona ireny, “Ahoana no nataonareo rehefa niady tamin'ny hanoanana isika?” Manana ny valiny ve isika? Misalasala aho an.
22 ora izayTiorkia
raha ny amiko manokana momban’io fanontaniana io dia tsy misy ankoatra n mivavaka aloa voalohany indrindra vao mitady famokisan-tena indray,izay angamba,misaotra
23 Avrily 2012, 21:54
Hiresaka koa -> tahiry ranaivomampianina